Rains – Vassa 2017 – Dhammadīpa
Rains – Vassa 2017
Posted on 10 Jul 2017 by Ashin Sopāka
“Monks, there are six things that foster love and respect, helpfulness and agreement, harmony and unity. What six? When one acts with love towards one’s companions in the spiritual life, both in public and in private; when one speaks with love towards them, both in public and in private; when one thinks with love towards them, both in public and in private; when one shares with them, without reservations, whatever one has acquired justly, even if it be no more than the food from one’s alms bowl; when one possesses together with them virtues that are complete, unbroken and freedom-giving, praised by the wise and conducive to concentration; and when one possesses with one’s companions in the holy life, both in public and in private, the understanding that is noble, leading to freedom and which conduces to the complete destruction of suffering; then will there be love and respect, helpfulness and agreement, harmony and unity.” – MN 48
“Chayime, bhikkhave, dhammā sāraṇīyā piyakaraṇā garukaraṇā saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṁvattanti. Katame cha? Idha, bhikkhave, bhikkhuno mettaṁ kāyakammaṁ paccupaṭṭhitaṁ hoti sabrahmacārīsu āvi ceva raho ca. Ayampi dhammo sāraṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṁvattati. Puna caparaṁ, bhikkhave, bhikkhuno mettaṁ vacīkammaṁ paccupaṭṭhitaṁ hoti sabrahmacārīsu āvi ceva raho ca. Ayampi dhammo sāraṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṁvattati. Puna caparaṁ, bhikkhave, bhikkhuno mettaṁ manokammaṁ paccupaṭṭhitaṁ hoti sabrahmacārīsu āvi ceva raho ca. Ayampi dhammo sāraṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṁvattati. Puna caparaṁ, bhikkhave, bhikkhu ye te lābhā dhammikā dhammaladdhā antamaso patta­pariyā­panna­mattampi, tathārūpehi lābhehi appaṭi­vibhat­ta­bhogī hoti sīlavantehi sabrahmacārīhi sādhāraṇabhogī. Ayampi dhammo sāraṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṁvattati. Puna caparaṁ, bhikkhave, bhikkhu yāni tāni sīlāni akhaṇḍāni acchiddāni asabalāni akammāsāni bhujissāni viññup­pasat­thāni aparāmaṭṭhāni samā­dhi­saṁ­vatta­ni­kāni tathārūpesu sīlesu sīla­sāmañ­ña­gato viharati sabrahmacārīhi āvi ceva raho ca. Ayampi dhammo sāraṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṁvattati. Puna caparaṁ, bhikkhave, bhikkhu yāyaṁ diṭṭhi ariyā niyyānikā niyyāti takkarassa sammā dukkhakkhayāya tathārūpāya diṭṭhiyā diṭṭhi­sāmañ­ña­gato viharati sabrahmacārīhi āvi ceva raho ca. Ayampi dhammo sāraṇīyo piyakaraṇo garukaraṇo saṅgahāya avivādāya sāmaggiyā ekībhāvāya saṁvattati.”
“ရဟန်းတို့ မပြတ်အောက်မေ့ထိုက်ကုန်သော, ချစ်ခြင်းကိုပြုတတ်ကုန်သော, လေးစားခြင်းကိုပြုတတ်ကုန်သော ဤခြောက်ပါးသောတရားတို့သည် သိမ်းသွင်းရန် ဝါဒမကွဲပြားရန် ညီညွတ်ရန် တစ်ပေါင်းတည်းဖြစ်ရန် ဖြစ်ကုန်၏။ အဘယ်ခြောက်ပါးတို့နည်း၊ ရဟန်းတို့ ဤသာသနာတော်၌ ရဟန်းအား သီတင်းသုံးဖော်တို့၌ မျက်မှောက်ဖြစ်စေ၊ မျက်ကွယ်ဖြစ်စေ ကာယကံမေတ္တာသည် ရှေးရှုတည်၏။ မပြတ်အောက်မေ့ထိုက်သော ချစ်ခြင်းကိုပြုတတ်သော လေးစားခြင်းကိုပြုတတ်သော ဤတရားသည်လည်း သိမ်းသွင်းရန် ဝါဒမကွဲပြားရန် ညီညွတ်ရန်တစ်ပေါင်းတည်းဖြစ်ရန် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ နောက်တစ်မျိုးကား ရဟန်းအား သီတင်းသုံးဖော်တို့၌ မျက်မှောက်ဖြစ်စေ၊ မျက်ကွယ် ဖြစ်စေဝစီကံမေတ္တာသည် ရှေးရှုတည်၏။ မပြတ်အောက်မေ့ထိုက်သော ချစ်ခြင်းကိုပြုတတ်သော လေးစားခြင်းကို ပြုတတ်သော ဤတရားသည်လည်း သိမ်းသွင်းရန် ဝါဒမကွဲပြားရန် ညီညွတ်ရန် တစ်ပေါင်းတည်းဖြစ်ရန် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ နောက် တစ်မျိုးကား ရဟန်းအား သီတင်းသုံးဖော်တို့၌ မျက်မှောက်ဖြစ်စေ၊ မျက်ကွယ်ဖြစ်စေ မနောကံမေတ္တာသည် ရှေးရှုတည်၏။ မပြတ်အောက်မေ့ထိုက်သော ချစ်ခြင်းကိုပြုတတ်သောလေးစားခြင်းကို ပြုတတ်သော ဤတရားသည်လည်း သိမ်းသွင်းရန် ဝါဒမကွဲပြားရန် ညီညွတ်ရန်တစ်ပေါင်းတည်းဖြစ်ရန် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ နောက်တစ်မျိုးကား ရဟန်းအား တရားနှင့်လျော်စွာဖြစ်ကုန်သော တရားသဖြင့်ရကုန် သောလာဘ်တို့ကို အယုတ်ဆုံးအားဖြင့် သပိတ်အတွင်းရှိ ဆွမ်းမျှကိုသော်လည်း မခွဲခြားဘဲ သုံးဆောင်ခြင်းရှိ၏၊ အကျင့်သီလရှိသော သီတင်းသုံးဖော်တို့နှင့် ဆက်ဆံသော သုံးဆောင်ခြင်းရှိ၏။ မပြတ်အောက်မေ့ထိုက်သော ချစ်ခြင်းကိုပြုတတ်သော လေးစားခြင်းကိုပြုတတ်သော ဤတရားသည်လည်း သိမ်းသွင်းရန့်ဝါဒမကွဲပြားရန် ညီညွတ်ရန် တစ်ပေါင်းတည်းဖြစ်ရန် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ နောက်တစ်မျိုးကား ရဟန်းသည် မကျိုးမပေါက် မပြောက်မကျားကုန်သော၊ တဏှာ့ကျွန်အဖြစ်မှ တော်လှန်ခြင်းကို ပြုတတ်ကုန်သော၊ ပညာရှိတို့ ချီးမွမ်းထိုက်ကုန်သော၊ အမှားအသုံးသပ်မခံရကုန်သော၊ တည်ကြည်ခြင်း ‘သမာဓိ’ကို ဖြစ်စေတတ်ကုန်သော စောင့်စည်းမှု သီလမျိုးတို့၌ သီတင်းသုံးဖော်တို့နှင့် မျက်မှောက်ဖြစ်စေ၊ မျက်ကွယ်ဖြစ်စေ စောင့်စည်းမှုသီလတူသည်၏အဖြစ်သို့ ရောက်လျက်နေ၏။ မပြတ်အောက်မေ့ထိုက်သော ချစ်ခြင်းကိုပြုတတ်သော လေးစားခြင်းကိုပြုတတ်သော ဤတရားသည်လည်း သိမ်းသွင်းရန် ဝါဒမကွဲပြားရန် ညီညွတ်ရန် တစ်ပေါင်းတည်းဖြစ်ရန် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ နောက် တစ်မျိုးကား ရဟန်းသည် ဖြူစင်သော (ဝဋ်ဆင်းရဲမှ) ထုတ်ဆောင်တတ်သောထိုအတိုင်းပြုသူအား ကောင်းစွာ ဝဋ်ဆင်းရဲကုန်ရန်ဖြစ်သော အယူမျိုး၌ သီတင်းသုံးဖော်တို့နှင့် မျက်မှောက်ဖြစ်စေ၊ မျက်ကွယ်ဖြစ်စေ အယူတူသည့်အဖြစ်သို့ ရောက်လျက် နေ၏။ မပြတ်အောက်မေ့ထိုက်သော ချစ်ခြင်းကိုပြုတတ်သော လေးစားခြင်းကိုပြုတတ်သော ဤတရားသည်လည်းသိမ်းသွင်းရန် ဝါဒမကွဲပြား ရန် ညီညွတ်ရန် တစ်ပေါင်းတည်းဖြစ်ရန် ဖြစ်၏။”
These are images that I’ve collected over the years, neglecting to keep their sources. Please let me know if an image is yours and I will credit appropriately, or deleted it. My sincerest apologies should you have been wronged in any way.
This entry was posted in Monasticism and tagged dhamma, vassa, ဝါဆို by Ashin Sopāka. Bookmark the permalink.
← Previous Previous post: Long-lasting Dhamma
Next → Next post: This Holy Life